Izindaba - "Ukuhambela eXiandu And Sacrificing Xuanyuan", Izinkulungwane Zabasebenzi BaseJinbang Holdings Balifezekisile Iphupho Labo “Lokukhonza Okhokho”
NgoNovemba, iJinyun inesimo sezulu esimnandi, umoya opholile kanye namafu amahle. Ekuseni komhlaka 21, abakwaGolden Stick Holdings Co., Ltd. bawuqale ngokusemthethweni umcimbi othi "Travel to the Xiandu City and Sacrifice Xuanyuan". Cishe abasebenzi abayinkulungwane babuthene emnyango we-greenway weJinyun Binjiang Park bahamba baya ngaseThempelini laseHuangdi eXuanyuan Huangdi Sacrhetic Center eningizimu yeChina benethemba eliphelele.
UJinyun Greenway ukalwe njenge- "Most Beautiful Greenway" kanye ne- "Ten Best Green Road" eSifundazweni saseZhejiang. Cishe kungamakhilomitha ayi-11 ukusuka eJinyun Riverside Park kuya endaweni ebabazekayo yeNtaba iZhutan eXiandu. Idwala likamamezala, umalume uJiao rock, iXiaochi Cliff, iDinghu Peak, iZhutan Mountain ... Enhla nomfula, izindawo eziwubukhazikhazi nezigodi ezinhle ezihambisana nomgwaqo oluhlaza yonke indlela, abantu bazohlangana nobuhle bemvelo kungalindelekile lapho bejika nxazonke.
Abasebenzi bakwaJinbang Sports, Jin Gutian Technology, Puqi Digital, Red Black Technology, Jinquan Technology, Megani Precision Equipment, Dolby Puqi namanye amagatsha eGolden Stick Holdings banomoya omuhle, futhi bamasha emgwaqweni oluhlaza ngobunono, nolayini welula amamitha angaphezu kwama-200. , Waba "indawo enhle kakhulu" eceleni komgwaqo oluhlaza wosuku. Abasebenzi abaningi bathe: "Imvelo kaJinyun yinhle kakhulu, singenza umsebenzi kanye nempilo. Kumele sisebenze kanzima lapha ukubona ukubaluleka kwethu empilweni".
Ngehora le-15 ntambama, amafu avuleka futhi ukuphuma kwelanga, ukukhanya kwelanga legolide kwabonakala eDinghu Peak naseXuanyuan Hall, umcimbi wokuhlonipha okhokhelwayo onesizotha futhi onesizotha weJinbang Holdings Co., Ltd. Izinkulungwane zabasebenzi bema esigcawini esiphambi kwethempeli ukukhonza ubukhulu besizwe samaShayina. Ukhokho uXuanyuan Huangdi ukhumbula ukufaneleka kokhokho futhi uvuselela umoya wentuthuko webhizinisi lenduku yegolide.
Umcimbi wokukhulekelwa kwamadlozi uqale ngezigubhu nezinsimbi. Lezi zigubhu ezingama-34 zimele izifundazwe ezingama-34, omasipala, izifunda ezizimele, kanye nezifunda ezikhethekile zokuphatha, kanti lezi zinsimbi eziyi-15 zimelela izizukulwane eziyizinkulungwane eziyi-1.5 zamaChina nezaseChina emhlabeni jikelele. Umpristi omkhulu, uJinbang Holdings, amalungu ebhodi nabamele amagatsha ahlukahlukene ngokulandelana bahloniphe uXuanyuan Huangdi ngamaphunga aphezulu, obhasikidi bezimbali, kanye nemihlatshelo emithathu yezilwane.
Ngemuva kokuthi u-Xu Yongqiang, usihlalo weGolden Stick Holdings Co., Ltd. ethule iwayini ku-Xuanyuan Huangdi Statue, omele iGolden Stick Holdings wafunda umbhalo womhlatshelo, futhi bonke ababambe iqhaza bakhothama eSifanekisweni saseXuanyuan Huangdi amahlandla amathathu. Lo mcimbi uphothulwe ngempumelelo emkhosini omangalisayo womculo nomdanso.
Igazi liyasuswa futhi lidluliselwe ezizukulwaneni ngezizukulwane. UXuanyuan Huangdi ungukhokho wesizwe samaShayina, iphayona elikhulu nomsunguli wempucuko yaseChina, kanye nesibopho esivamile esingokomoya samadodana namadodakazi aseChina ekhaya naphesheya. Ukubanjwa ngempumelelo komkhosi wokukhulekela okhokho weGolden Stick Holdings kufezekise iphupho labo bonke abasebenzi lokuthi babambe iqhaza ekukhonzeni ukhokho uXuanyuan Huangdi.